Shirka Wasaaradaha Maaliyada DG & DFS oo warsaxafadeed laga so saaray - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Shirka Wasaaradaha Maaliyada DG & DFS oo warsaxafadeed laga so saaray
Shirka Wasaaradaha Maaliyada DG & DFS oo warsaxafadeed laga so saaray
Waxaa la soo gabagabeeyay Shirka wasiiradda Maaliyadda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, shirkan oo labo cisho ka socday Hotelka Decale ee Garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa maanta laga soo saaray War murtiyeed.
Shirkan ayaa la isku afgartay in si wanaagsan oo lagu wada qanacsan yahay loo qeybsado kabkii Miisaaniyadda.
Hirgelinta nidaam canshuureed oo qiime ku saleysan kaasoo aan laheyn wax cabshuur kordhin balse muhiimadiisa tahay la jaanqaadka gamacsiga dunida iyo mideynta maamulka furdooyinka dalka
Sidoo kale waxaa lagu heshiiyay in in dakhliga wadanka loo qeybsado qaab ka duwan qaabkii hore iyadoo arrintan loo saaro guddi farsamo si loo gaaro in wax lagu qeybsado qaab formula ah la isla ogol yahay.
Previous articleSiihayaha RW Mahdi Guleed oo lakulmay Gudiga baaraya dhacdadi xabsiga dhexe
Next articleBeecinta kursiga RW oo bilaabatay! “Musharaxiinta qaar oo sheegay in lacago “sooryo” ay siiyeen Mursal & Muudeey
Ciidanka Kenya oo markale duqeeymo ka geystay Gedo
Cabdi Xaashi oo magacaabay Guddi soo diyaariya Habka Doorashada xildhibaanada Gobollada Waqooyi
(Akhriso) Qaabka loo qeybiyay kuraasta Doorashooyinka Xildhibaanada 2020
Wararka Faysal Ali Axmed (Alteeso) - October 1, 2020
Wararaka laga helayo degaano hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa ay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka dalka Kenya ay halkaasi ka fuliyeen duqeymo...
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa magacabay Guddi soo diyaariya habkii loo qaban lahaa Doorashada xildhibaannada kasoo jeeda Gobollada Waqooyi ee Somaliland. Qoral kasoo...
Shirkii Dowladda Federaalka & Dowlad Goboleedyada ayaa lagu go'aaniya shaxda qaabka kuraasta doorashada loogu qaban lahaa laba magaalo oo ka tirsan maamulada Dowlad Goboleedyada,...
In a state with one of the largest Somali communities, Trump...